Socdaalka Kate Leeming - BBC Somali
Socdaalka Kate Leeming
Image caption Kate Leeming waxa ay baaskiil ku mareysaa in ka badan labaatan dal oo Africa ah
Haweenay u dhalatay dalka Australia, Kate Leeming, oo dhowr iyo labaatan dal oo Africa ah ku maraysay baaskiil, ayaa haatan gaartay geeska Africa.
Waxay ku sugan tahay Puntland, iyadoo horay u soo martay Somaliland.
Kate Leeming, ayaa dhowaan gaartay magaalada Xaafun.
Wuxuu safarkeeda ka mid yahay olole ay ugu magac dartay Breaking the circle oo ilaa 22000 km ay ku marayso baaskiil.
Weriyaha BBC Cabdiraxmaan Krootno, ayaa Kate Leeming ka waraystay safarka ay bicycle-ka ku gaartay deegaankada Xaafun ee Puntland.
"Ujeedada safarka waa in aan eegno noocyada kala duwan iyo sababaha keena saboolnimada daran, iyo dhibaatooyinkaas wixii laga qabtay. sheekooyin wanaagsan ayaan ku soo aragnay laga soo bilaabo galbeedka Africa. Dalalka inta badan waxay ku howlan yihiin barnaamij wax looga qabanayo. Howl ballaaran ayaan wadnaa, waxaan abuurnay barnaamij waxbarashada caruurta ah oo loogu talogalay caruurta Australia balse ay ka faa'iidaysan karaan caruurta dalalka kalena. Sidoo kalena waxay samaynayaa barnaamij diiwaangalin."
Waxay Kate Leeming bicycle ku soo martay 21 dal oo Africa ah, oo ay ugu dambaysay Ethiopia
Gaar ahaan, dhulka Soomaalida ee ay soo martay ayay iiga warantay
"waxaan ka soo galnay Ethiopia oo gaarnay Somaliland, magaalada Hargeisa, kadibna waxaanu soo marnay Berbera, kadibna Garowe, ilaa safar dheer oo 350 km oo aan ku soo gaarnay Xaafun."
Waxay sheegtay in maamulada Somaliland iyo Puntland-ba in ay ka caawiyeen dhinaca amniga.
Maamulka Puntland ayay sheegtay in ay taageero xoog leh siiyeen oo ay raaciyeen ilaalo hubaysan oo dhinaca amniga ka taageerta.
waxaan ka soo galnay Ethiopia oo gaarnay Somaliland, magaalada Hargeisa, kadibna waxaanu soo marnay Berbera, kadibna Garowe, ilaa safar dheer oo 350 km oo aan ku soo gaarnay Xaafun.
Kate Leeming waxay sheegtay oo kale in arrimaha ay ku eegayeen safarkooda ay ka mid ahaayeen aqoon la'aanta caruurta.
Waxaan waydiiyay sida ay u aragto goobaha ay dhulka Soomaalida ka tagtay aqoon la'aanta caruurta ee ka jirta.
"xoogaa way nagu yara adkayd in aan fursad badan u helno, maadaamo ilaalo badan ay na wehliyaan, fursad waan u helnay in dhowr iskuul oo ku yaalla Garowe aan soo eegto. Waxaan ogahay in dowladda halka ay muhiimad siinayso horumarinta waxbarashada, oo waxay ka mid tahay arrimaha ugu muhiimsan ee ay wax ka qabanayaan. Balse aad ayay u adag tahay in wax la baro dadka baadiyaha dega, markaa kuma siin karo tiro iyo warar rasmi ah, hase yeeshee, sida la hubo arrinta dhibka leh ee hadan loo baahan yahay in waxbarashada la gaarsiiyaa dadka reer guuraaga ah iyo kuwa baadiyaha dega."